Nametraka hatrany ho laharam-pahamehana izay fanabeazana sy fampianarana izay ny tenako, hoy ny ben’ny tanàna ao an-toerana, Rado Ramparaoelina ary angady nananana sy vy nahitana io lisea io. Fampanantenako ny vahoaka tamin’ny taona 2007 rahateo io ary tamin’izany dia nahavita efitrano 7 izahay. Ankehitriny dia miisa 16 ny efitrano. Nisy ny ezaka nataon’ny ray aman-drenin’ny mpianatra sy ny provizera ao an-toerana. Nisy koa fangatahana tamin’ny fitondrana nifandimby ary nisy koa ezaka manokana avy amin’ny kaominina. Ankoatra io moa dia tetikasan’ny kaominina koa ny resaka lalana sy tsy fandriampahalemana, izay mifandraika hatrany amin’ny famoronana asa ary ny fahefatra dia ny sosialim-bahoaka. Nisongadina ny fampianarana ary tao anatin’ny 4 taona izay dia nampanantena ny ben’ny tanàna fa hisy ny vokatra ho an’ireo mpianatra ireo. Hanalana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny ihany koa dia nifanarahana fa izay voalohany amin’ny serie A, C, D dia nomena 1 tapitrisa ariary ny voalohany ary ny faharoa, 7 etsy ariary.